Misy Gazety iray aloako: wired | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 26, 2009 Alatsinainy Janoary 26, 2009 Douglas Karr
Fantatry ny namako fa snob boky aho. Tiako ireo boky mirakotra. Tsy misy toa ny triatra amin'ny hazondamosin'ny virijina sy ny fofon'ny pejy malemy misy ranomainty vaovao eo aminy. Ny boky vaovao dia mahatsapa ho toy ny fanomezana ho ahy foana… ary ahy ny ahy, ahy rehetra!
Izaho kosa miasa amin'ny snobbishness misy ahy mafy! Tsy azoko atao ny mahatsiaro tena ho meloka amin'ireo boky rehetra miangona eo amin'ny manodidina ny tranoko izay mendrika hovakin'ny olon-kafa izay tsy vonona ny hanaikitra ny vidiny. Ho tonga any aho, mampanantena aho. Afaka herinandro eo ho eo dia hanao fifaninanana aho ary hanome boaty misy kapila mafy tsy voavaky… mbola ao anaty plastikan'izy ireo. Mifikitra!
Na izany na tsy izany… araka ny fitiavako ny fahatsapana taratasy dia najanoko ny famakiana gazety taona maro lasa izay. Niresaka tamin'ny John Ketzenberger, mpitati-baovao Star Business (pun tin) momba azy herinandro na lasa izay. Nijanona tamin'ny fividianana gazety aho rehefa niova ny fanaovan-gazety ho mpamenony ny dokam-barotra.
Nijanona tsy nividy gazety aho rehefa nanomboka nanao dokam-barotra momba ny tapakila firy tamin'ny fanontana tamin'ny alahady ny gazety fa tsy hoe ohatrinona ny vaovao hitany. Mampalahelo ahy ihany io. Raha tsy teo amin'ny tsanganana John dia tsy azoko antoka fa mbola namaky ny The Indianapolis Star an-tserasera koa aho.
Mbola misy famoahana pirinty iray izay tsy andriko ny hamahana sy hisokafany,… ary izay Gazety tariby. Nijanona ny fisoratana anarana taona lasa izay aho rehefa nifindra tamin'ny sary lehibe, pirinty kely izy ireo… fa ny roa taona lasa dia nahagaga. Tsy misy fluff artsy intsony - turner pejy rehetra. Vitsy dia kely ny fanontana izay tsy laniko amin'ny fonony. Namaky ny taon-dasa aho ary nahatsikaritra fa nibilaogy momba ny lahatsoratra Wired indray mandeha isaky ny 2 ka hatramin'ny 3 volana.
Gazety tariby amin'ity volana ity:
Ao anatin'ny Revolisiona GPS: Fampiharana 10 izay manome ny toerana betsaka indrindra
Ny filoham-pirenena tariby: tena afaka mamerina ny tranony fotsy ve i Obama?
Ny tetika hamonoana an'i Google
ADNAN DIY: Fiezahan'ny raim-pianakaviana iray hametaveta ny kaody génetika an'ny zanany vavy
The Dark Lord of Broadband dia manandrana manamboatra ny sarin'i Comcast
Koa satria ato anaty Internet izao ireo lahatsoratra ireo dia tena manantitra anao aho hamaky ireo lahatsoratra ireo. Raha feno famakiana lahatsoratra bilaogy ny andronao ary ianao dia iray amin'ireo olona manontany tena hoe nahoana izahay no mila mpanao gazety intsony, tokony hiova hevitra ny iray amin'ireto lahatsoratra ireto. Ny fikarakarana sy ny fanoratana natao tao anatin'ireto lahatsoratra rehetra ireto dia mitsambikina avy eo amin'ny pejy… er… efijery.
Rehefa mieritreritra ny vola aloako amin'ny boky mafy sy mafy aho ary ohatrinona ny vidin'ny Magazine Wired - manontany tena aho hoe maninona aho no tsy mandoa vola bebe kokoa amin'ny famandrihako. Tsy misy na dia magazine iray aza eny an-tsena izay misarika ny saiko ary mitatitra betsaka momba ny sehatry ny haitao ary koa ny Wired.
Tsy afaka miandry aho amin'ny Wired amin'ny volana ho avy!
Tags: fahazarana mividypaikadin'ny fifandraisana
Jan 27, 2009 ao amin'ny 3: 02 AM
Izaho manokana dia tia Wired fa nanana fifandraisana indray. Mamaky azy io aho izao.
Jan 29, 2009 ao amin'ny 2: 13 AM
Ny tariby ihany no ifikirako. Izaho dia gamer ary nahazo Game Informer tato anatin'ny 2 taona lasa, saingy izany dia satria miaraka amin'ny karatra fihenam-bidy Game Stop.
Jan 29, 2009 ao amin'ny 11: 37 AM
Ireo mpamaky tsy tapaka ny bilaoginay (www.inmedialog.com) dia hahafantatra fa mpanohana fatratra ny fahombiazan'ny asa fanaovan-gazety isika na inona na inona endrika. Miara-miory amin'ireo izay tsy maintsy mijaly amin'ny gazety isan-tanàna an-tanàndehibe faharoa na fahatelo aho; Azo antoka fa izany no zava-misy eto Ottawa, Kanada, izay ny fako eo an-toerana dia tranga tsy manjary an'ny fananana haino aman-jery orinasa mihazakazaka hatrany ambany.
Soa ihany isika fa manana gazety nasionaly faran'izay tsara iray, ny Globe sy Mail, izay miakatra eo am-baravarako maraina isa-maraina. Io dia ilaina ny famakiana mialoha ny eo amin'ny fiainako nandritra ny 25 taona lasa izay. Izy io dia laharana iray amin'ny gazety miteny anglisy mahay indrindra eto an-tany.
Ny famakiana ny Globe isan'andro dia mamela ahy hanana fotoana be dia be ho an'ny vanim-potoana hafa noho ny fiankinan-doha mafy nataonao, Douglas, saingy mizara ny fitiavanao an'i Wired aho. Nanjary magazine nomerika nomerao ahy hatramin'ny nandehanan'ny Business 2.0. (Azonao atao ny mamaky ny obit ho an'ny 2.0 eto: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/) Manana ny gadget-sy-geek bebe kokoa izy ary kely noho ny an'ny orinasa no resahina aminy noho ny 2.0, saingy mahatalanjona ny fanoratana, ny fiasa dia mazàna nohadihadiana tsara sy be eritreritra ary amin'ny fotoana nahavitako azy, isaky Ny olana dia misy zoro pejy marobe miverina hampahatsiahy ahy hijery akaiky izay nosoratana tamin'io pejy io.
Mahazo magazine marobe atolotra ny masoivohon'ny PR izahay izay mifantoka amin'ny haitao isan-kerinandro; Ny tariby dia ny mpiasa iray ihany no baiko tsy maintsy apetraka eo ambony latabako raha vao tonga izy io.
29 Jan 2009 amin'ny 12:24 PM
Niara-niasa tamin'ny The Globe sy Mail aho tokony ho 5 na 6 taona lasa izay ary nanaiky ny fanombanana nataonao. Ny Globe, tamin'io fotoana io, dia niahiahy fatratra ny hahatratra ny mpihaino marina… Tsy ny fanatrarana olona fotsiny dia mety mividy ilay taratasy. Nisoroka fihenam-bidy ihany koa izy ireo - izany rehetra izany dia nanome lanja kokoa ny gazety. Ny Globe sy Mail dia mety mihoatra ny Wall Street Journal ho toy ny gazety mpandraharaha tsara indrindra manerantany. Tena taratasy tsara sy fandaminana mahafinaritra izy ity!
Misaotra nanampy tamin'ny resaka!